चुक्दैछन् ओबामा !
© 2014 by Sampreshan USA. All Rights are reserved.
अमेरिकी इतिहासमा सन् २००८ एउटा युगान्तकारी र स्वर्णिम इतिहास रच्दै वैचारिक र व्यवहारिकरुपमा अमेरिकालाई सम्पूर्ण कायापलट गर्नसक्ने सम्भावनाको वर्ष थियो । यो राजनैतिक कालखण्ड कवि गोपालप्रसाद रिमालले कल्पना गर्नु भएको जस्तै एक जुगमा एकपल्ट आउने एक दिन थियो तर राष्ट्रपति बराक ओबामाको युग चेतना र अनुभवको अभावका कारण र अमेरिकी यथास्थीतिवादी सोंच , स्वरुप र राज्य व्यवस्थाको कारण अमेरिका एक कदम अगाडि बढेर फेरी दुई कदम पछाडि फर्कियो ।
यस्तै प्रकारको सम्भावना र आशावाद राष्ट्रपति वील क्लिनटनको कार्यकालमा देखापरेको थियो तर क्लिन्टनको कार्यकाल आर्थिक उन्नतीका दृष्टिकोणले स्वर्णीम काल रहेपनि सामाजिक न्याय र परिवर्तनका मुद्दाहरुमा एक कदम पनि वायाँ वा अगाडि बढ्न सकेन । फलत दोश्रो कार्यकालमा काँग्रेसमा आफ्नो बहुमत गुमाएको कारण तुलनात्मक रुपमा उदार र प्रगतिशिल एजेण्डा सहित अगाडि बढेको राष्ट्रपति अन्तमा मध्यपन्थलाई आफ्नो वैचारिक धार बनाउन बाध्य हुनुप¥यो ।
समाजवादी राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिएको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको नैसर्गिक पहुचलाई अमेरिकी पुरातनिक दक्षिणपन्थी पूजिवादमा लागुगर्न तम्सिएका राष्ट्रपति क्लिन्टन पूर्णत असफल भए । दक्षिणपन्थी मियोमा मध्यपन्थी रणनीतिक वैचारिक धारमा अमेरिका निरन्तर घिस्रिरहेको छ । परिवर्तन असम्भव नभएपनि नितान्त कठिन छ र यथास्थीतिवादमा रमाउनु अमेरिका र पुरातनिक अमेरिकीहरुको रुची हो । नयाँ वर्ग र वर्णको पहुचमा केन्द्रिय राजनीति पुगेजस्तो देखिएपनि यथार्थमा पुरानै ढाँचा ढर्राको कर्पोरेट अमेरिका नै राजनीतिक मुक खेलाडीहरु हुन् ।
पुरातनिक अमेरिका र दक्षिणपन्थी परम्परावादी रिपब्लिकनहरुको शक्तिको श्रोत भनेको गड र गन हुन् । अनपेक्षितहरुमा यी शक्तिका श्रोतहरु ह्रास र स्खलनतर्फ उन्मुख छन् । युरोपबाट प्रारम्भ भएको धार्मिक उदारता , धर्म निरपेक्षताका कारण धर्मान्धता धराप र जोखिममा पर्न थालेका छन् भने स्याण्डी हुक र अरोरामा भएका गोलीकाण्डका कारण नेशनल राइफल्स एसोसिएसन र उनका संरक्षक रुढीवादी दक्षिणपन्थीहरु कमजोर हुन थालेका छन् । तर व्यापक विरोध, जनदवाव र राष्ट्रपति ओबामा र न्युयोर्कका पूर्व मेयर माइकल ब्लुमबर्गको प्रयासका वावजुत पनि अमेरिकी कँग्रेसमा एन्टीगन ल सन् २०१३ मा पारित हुन सकेन । तर अटल इच्छाशक्ति र नेतृत्वका कारण न्युयोर्क राज्यका गभर्नरले बन्दुक विरुद्धको कडा कानुन पारित गर्न सफल भए ।
सामान्यतया दोश्रो कार्यकाललाई कार्यान्वयन कार्यकालका रुपमा लिइन्छ । त्यस अर्थमा राष्ट्रपति ओबामाको दोश्रो कार्यकालमा आम नागरिकको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको छ । दोश्रो कार्यकालको प्राथमिकतामा परेका आप्रवासी विधयेक, बन्दुक विरुद्धको विधयेक, वातावरण परिवर्तन विधयेक र ज्यालादर बढाउने विधयेकले खास गति लिन सकेन । बृहद आप्रवासी सुधार विधयेक गत जुनमा तथाकथित ग्याङ अफ एटको सकृयतामा पारित भएपनि विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीका प्रचण्ड बहुमत रहेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा हुन्छ वा हुन्न भन्ने मतदानको लागि पेश हुन सकेन । आवश्यक गणपुरुक संख्या २ सय १८ बनाउने धुनमा पुरै एकवर्ष वित्यो । सबैभन्दा बढी आशा गरिएको यो विल ११ मिलियन भन्दा बढी कागजपत्र विहिन आप्रवासीहरुका लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भयो ।
कमसेकम यो प्रस्तावित विधयेकलाई मतदानका निम्ती फ्लोरमा ल्याउनेसम्म साहस डेमोक्रेटिक पार्टीले गरेको भए आम मतदाताले रिपब्लिकनहरुको ध्येय र नियत बुझ्ने थिए । विगत दुई दशकदेखि श्रमजीवि ऐनमा परिवर्तन या परिमार्जन गरिएको छैन । विश्वको एकल शक्तिराष्ट्र भनेर स्वघोषणा गर्ने औद्योगिक राष्ट्र अमेरिका लज्जाहरुको विभुषणमा निरपेक्ष आडम्बर, सुप्रिमेसी र हेजेमोनी बोलिरहेको छ । जहाँको नागरिकले प्रति घण्टा ७ डलर २५ सेन्ट पाँउछ, त्यो कमाई भनेको गरिवीको रेखामुनीको कमाईमा देखिन जान्छ । रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने कामदार (टिप्स वर्कर )हरुले प्रतिघण्टा २ डलर १३ सेन्ट पाउँछ , यो मुल कानुन विगत दुई दशकदेखि परिवर्तन भएको छैन । संसारका औद्योगिक राष्ट्रहरुमध्ये अमेरिकामात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जसले आफ्ना नागरिकहरुलाई विरामी विदा र सुत्केरी विदाको प्रत्याभुत गर्दैन । लाज ढाक्नलाई फेमिली मेडिकल लिभ एक्टको नाममा सदन रिसेस (विदा ) मा जानुअगाडि एउटा विधयेक सिनेटमा प्रस्तावमा गरिएको छ । राष्ट्रपति ओवामाले वर्तमान प्रति घण्टा ७ डलर २५ सेन्टबाट बढाएर नौ डलर पु¥याउने आश्वासन गत सालको स्टेट अफ द युनियनको सम्बोधनमा दिनुभएको थियो । त्यो प्रस्तावित आस्वासन विधयेकका रुपमा आउन सकेको छैन । बरु सामाजिक उदारवादले निरन्तर अग्रता लिन थालेको छ । त्यसको पछिल्लो प्रमाण र नजिरका रुपमा समलिंगी विवाहलाई विभिन्न राज्य र शहरले दिएको काुनी मान्यता र वैधानिकतालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै गाँजाको उपलब्धतालाई सरलीकरण गर्दै यसको प्रयोगलाई औषधीकारुपमा उपयोग गरिएमा कानुनी मान्यता पाउने भएका छन् । किनमेल सर्वसुलभ भएपनि यसको सेवनलाई भने पूर्ण वैधानिकता दिइएको छैन ।
अमेरिकी सिनेट र कँग्रेसको कार्य सम्पादन र दक्षताको मापन गर्ने हो भने सन् २०१३ अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा निराशाको वर्ष रह्यो । इतिहासमै सबभन्दा कम विधयेकहरु पारित भए । कँग्रेसको लोकप्रियता अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा कम प्रतिशतमा झ¥यो । अर्थात् कँग्रेस सबैभन्दा बढी अलोकप्रिय भयो । राष्ट्रपतिको लोकप्रियता ४० प्रतिशतमा ओर्लियो । यो राजनीतिक डेडलक सन् २०१४ को मध्यावधि निर्वाचन अगाडि खुल्नेवाला छैन । यो वर्ष हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका सम्पूर्ण ४३५ सिट र सिनेटको एक तिहाई सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रपति ओबामाको डेमोक्रेटिक पार्टीले कँग्रेसमा पुन बहुमत कायम गर्न सक्यो भनेमात्र थाँतीरहेका विधयेकहरु अमेरिकाको ल अफ ल्याण्ड बन्नेछन् । होइन भने विधयेकमा हस्ताक्षर गर्न तयार पारिएका ओबामाका बग्रेल्ती कलमका मसीहरु समयान्तरमा आफै सुक्नेछन् । अनि अमेरिकालाई वैचारिकरुपमा कायापलट गर्ने सत्कर्मबाट पनि चुक्नेछन् । त्यो भनेको क्लिन्टन एराको पुनारावृत्ति बाहेक केही हुनेछैन । प्राइमरी र पहिलो कार्यकालमा प्रगतिशिल अनि सत्तारोहण र दोश्रो कार्यकालमा मध्यपन्थको नाममा वैचारिक समर्पण । इतिहासको पुनरावृत्ति एक कदम अगाडि अनि दुई कदम पछाडि । गड ब्लेस अमेरिका ।
(न्युयोर्कका अधिकारकर्मी तथा संचारकर्मी श्रेष्ठ खसोखास साप्ताहिकका नियमित लेखक हुन् । )
खसोखास साप्ताहिकको वर्ष ३ अंक १ पूर्णाङ्क १०२, बिहीवार, माघ २–८, २०७० मा प्रकाशित ।
"कामचलाउ" एनआरएन अमेरिका?
अमेरिकी मूलधारमा छलाङ्ग मार्दै नेपाली अमेरिकीहरु
थेत्तरो एनआरएन अमेरिका र आकाशे सपनाहरु
नेपाली संगीत बजारका राजेश पायलहरु र गीत संगीतका प्रवासी घायलहरु
जेम्स कोमीको "जीवनजल" र डोनाल्ड ट्रम्पको भिरालो राष्ट्रपतीय यात्रा
प्रवास र उद्यमशीलता
नाटकको समिक्षा लेख्ने बेलै भएको छैन
नेपाली नेताहरु र "अख्तियारफोबिया"
प्रवासी नेपाली समाज: युटोपियन साम्राज्य
राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी: सहज आरोहण, कठिन अवतरण